मोबाइल पासवर्ड नदिँदा जिउँदै जलाइन् श्रीमान्लाई ! - PUBLICAAWAJ
मोबाइल पासवर्ड नदिँदा जिउँदै जलाइन् श्रीमान्लाई !
प्रकाशित : बिहिबार, चैत २१, २०७५१४:२८ पब्लिक आवाज / संवाददाता , अम्बिका
एजेन्सी, बढ्दो प्राविधिक विकाशले मानिसलाई सामाजिक हुनबाट रोकिरहेको धेरैको विश्वास छ । यसले मानसिलाई प्रविधिमा मात्र निर्भर बनाएको छ ।
मानिसहरु प्रविधिमा यति सम्म तल्लिन भैसकेका छन् कि यसले इन्डोनेसियामा निकै अप्रिय घटना घटाएको छ । इन्डोनेसियाको पश्चिम नुसा टेङ्गोरा प्रदेशको पूर्वी लम्बोर्क रिजेन्सीमा इल्हाम चहयानीले २६ वर्षीय आफ्ना श्रीमान डेडी पुरनामालाई जलाएर मारेकी छिन् ।
यसको कारण यति मात्र थियो कि श्रीमानले उनलाई मोबाइलको पासवर्ड दिएनन् । छतमा केहि काम गरिरहेका डेडीलाई श्रीमती इल्हामले उनको मोबाइलको पासवर्ड मागिन् । पासवर्ड दिन नमान्दा उनीहरु बीच झगडा भएको थियो । झगडाको क्रममा डेडीले श्रिमती माथि हात उठाएका थिए ।
तर श्रिमतीले भने डेडीमाथि पेट्रोल छर्किएर आगो लगाइन् । पूर्वी लम्बोर्क प्रहरीका अनुसार मोबाइलको पासवर्ड डेडीले नदिएपछि उनकी श्रीमतीले पेट्रोल भरिएको भाँडो श्रीमानमाथि खन्याएर आगो लगाएकी हुन् । प्रहरीले उनलाई हिरासतमा लिइसकेको छ ।
नागरिकको सुरक्षामा तैनाथ हुन गृहसचिवको निर्देशन
चितवनमा भन्सार छली ल्याएका कपडा वरामद
पोखरामा १४ वर्षीय युवतीको घाँटी रेटेर हत्या
मा’दक प’दार्थ से’वन गरी हजुरआमासँग सुतिरहेकी सात वर्षीया छोरीलाई बोलाएर क’रणी